Copy/Paste » မောင်မိုးပြာ၏ဆရာ ဘာ့ကြောင့် ပြာ (၅)	20
အနိစ္စ မမြဲဟူသည် အချိန်မရှိမှဖြစ်မည်၊ ရှိလျှင် ရှိသောအချိန်၏ တစ်ဝက်နှင့်စာက မြဲနေဦးမည်၊ ထို့ကြောင့် အနိစ္စဟူသည် အချိန်ကိုငြင်းဆို ချက်ဖြစ်ရမည်။ ဒုက္ခ ဆင်းရဲဟူသည်လည်း ပယောဂမရှိမှ ဖြစ်မည်၊ ရှိလျှင် ရှိသောပယောဂထက် ဆင်းရဲသည်ထက်စာ၍ ချမ်းသာနေဦးမည်၊ ထို့ကြောင့် ဒုက္ခဟူသည် ပယောဂကိုငြင်းဆိုသော စကားဖြစ်မည်။ အနတ္တ သာရမရှိဟူ သည်လည်း သာရတည်ရာဌာန မရှိမှဖြစ်မည်၊ ရှိလျှင် ရှိသောအထည်ကို ထောက်ပြီး တည်ရာဌာနများ ထွက်နေဦးမည်။ ထို့ကြောင့် အနတ္တဟူသည် ဌာနကိုငြင်းဆိုသော စကားဖြစ်မည်။ ဤသို့ တွေးမိသောအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်၌ ကာလ၊ ဌာန၊ ပယောဂများကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ တပည့်တော်တို့ သည် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်၌ ကာလ၊ ဌာန၊ ပယောဂများကို လက်ခံခဲ သည်။ အဘယ်သို့နည်းဟူ၍လည်း ဖြစ်ပြန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်များ၌ ကာလ၊ ဌာန၊ ပယောဂ ရှိ မရှိ သိနိုင်ရန် ထိုရုပ်၊ ဝေဒနာ သညာ စသည်ကို လေ့လာရပါသည်။
chitmg says: မဝေ့နဲ့ တကြောင်းထဲဖြေကြည့်။ ဘာလို့ “ပြာ” လဲ???????????????????
မောင်မိုးပြာ says: မဟနက အနိုင်ကျင့်လို့
we ren thu says: မပာန က အနိုင်ကျင့်လို့ ဆိုတော့ မပာန ဘုန်းဘုန်းတွေက သူတို့ ဆွမ်းသူတို့ စားပြီး အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာ အားနွဲ့ သူကို လိုက်အနိုင်ကျင့်သလို ဖြစ်နေပါပေါ့လား ….ဒါဆို မပာန နဲ့တကွ
we ren thu says: ကိုchitmgခဗျာ သူတို့ မိုးပြာကလေ “ပြာချင်လို့ ကို ပြာနေတာပါဗျာ” အပာင့်အပာင့် လစ်ပြီဗျို့တော်ကြာ အားနွဲ့ သူကို အနိုင်လာကျင့်နေပါဦးမယ် သူတို့ ရဲ့ ထောင်ထဲက ဘဘဘုရား လေး ဥာဏအားကိုးနဲ့ လေ
countryboy says: တရားမသိသူဟာ သူများအားကိုးတာသေချာတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း ဘုရားစေတီတွေ၊ စွယ် တော်တွေ၊ ဓာတ်တော်တွေ ပေါကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနှင့် လူလည်တွေရဲ့ လှည့်ပတ်မှုကို ခံရတာပေါ့။ ဒါဟာ အားကိုးတွေမဟုတ်လား။
kyawza says: “မြတ်စွာဘုရား၏ ဘဝအမြင်၊ လောကအမြင်များသည်လည်း တပည့် တော်များ နားလည်၍မရနိုင်အောင် ဖြစ်နေခဲ့ကြပါသည်။” ဗုဒ္ဒအဖြစ်သို့ရောက်ပြီး တဲ့အခါမှာ လူတွေရဲ့ အမြင်နဲ့ ဗုဒ္ဒရဲ့ အမြင်က ထပ်တူမကျတော့ဘူး။ နားလည်ချင်ရင် သူရဲ့ အဆုံးအမတွေကို သဘောပေါက်အောင် နားထောင်ပြီး နားလည်ဖို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုးစားမှရမယ်။ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ကျုပ်တို့ လူတွေနဲ့ အမြင်ကွဲပြားတယ်။ ဒါကို မသင့်တော်ဘူးလို့ မဆိုနိုင်ဘူး။ မြတ်စွာဘုရားကို မဖူးမြင်လိုက်ရခြင်းကြောင့် နားမလည်ဘူး လို့ရေးပြတာ ခပ်ကြောင်ကြောင် စာရေးတာပဲဗျာ။ ဒီဘက်ခေတ် လူတိုင်း မြတ်စွာဘုရားနဲ့ မတွေ့ထိလိုက်ရဘူး။ လုပ်စရာ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ သူ့အဆုံးအမကို နားထောင် လေ့လာ စာဖတ် ..ဒီ့အပြင် ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံ အားထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ ဒါအကောင်းဆုံးပဲ.. ရှင်းတယ်နော်။ ခပ်ကြောင်ကြောင် ရေးတာတွေ ကိုပြောဖို့ တစ်နည်းပဲရှိတယ်။ ခင်ဗျား အိုင်စတိုင်းရဲ့ ရီလေးတစ်ဗတီ ကို အကုန်နားလည်လား၊ စတီဗင်ဟော့ဖ်ကင်း တွေ့ရှိချက်တွေ ကိုနားလည်လား။ ကွမ်တန်သီအိုရီကို နားလည်လား။ ဘယ်လိုနားလည်လဲ။ ကျုပ်တို့တော့ နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တွေ့ရှိချက် ဆိုတာတွေဟာ လူတွေအကုန် နားလည်ဖို့ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ လူတချို့ ပဲနားလည်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ လူ တစ်ယောက် နှစ်ယောက်လောက်ပဲ နားလည်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ အစိတ်အပိုင်း နည်းနည်းလောက်ပဲ နားလည်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်မယ်။
ဗုဒ္ဒအဆုံးအမ တွေကို အကုန်နားလည်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ဗုဒ္ဒက ဧဟိပသိ ..လာလှည့်ရှုလှည့်လို့ ရေးထားတယ်။ ခင်ဗျားတို့မိုးပြာက တောလိုလို တောင်လိုလိုနဲ့ စကားလုံးတွေ လှည့်ပတ်ပြီး ရေးသားချက်တွေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာတယ်။ ဗုဒ္ဒက စိတ်ကိုအဓိကထားဟောတယ်။ စိတ်နဲ့ပတ်သတ်တာတွေက စကားလုံးအဖြစ်အသွင်ပြောင်းရင် စကားလုံးအဆင့်၊ စာနဲ့ချရေးရင် စာလုံးအဆင့်ပဲ ရှိတယ်။ လက်တွေ သဘောပေါက်တာလည်း လူတစ်ယောက် သဘောနဲ့ တခြားတစ်ယောက် သဘော တူတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အဲ့ဒီတော့ လေ့လာတယ်ဆိုတာ စာဖတ်ရုံနဲ့ သူများစကားပြောတာ နားထောင်ရုံနဲ့ မရဘူး။ ဒါကြောင့် မိုးပြာက ရေးတဲ့ စာမှန်သမျှ.. တန်ဖိုးမရှိဘူး။ ရှင်းတယ်နော်..။
မောင်မိုးပြာ says: စာဖတ်တာ စကားပြောတာတွေကို အချီးအနှီးလို့ ယူဆလျှင်တော့ ပိဋကတ်ဆိုတာ ဘာလို့သင်နေစရာလိုအုံးမှာလဲ။ တရားတွေလည်း နာနေစရာလိုအုံးမှာလား။ စကားတွေကို ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ပြောဖို့လိုမှာပါ။ အိုင်းစတိုင်းတို့၊ စတီဖင်ဟော့ကင်းတို့ဆိုတာ လောကထဲမှာ တကယ်ရှိနေတာတွေကို စာပေအဖြစ် နည်းပညာအဖြစ် ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့လို့သာ လူတွေ သိခွင့်ရကြတာမဟုတ်လား။ စကားတွေ စာတွေဟာ လူတွေကို ကောင်းအောင် ဆိုးအောင် မတတ်နိုင်ကြဘူးလို့များ kyawza မှတ်ယူလိုတယ်ဆိုလျှင် ဘာစာ ဘာစကားမှ နားမထောင်ပဲ တစ်ပတ်လောက်နေကြည့်စေချင်ပါတယ်။
kyawza says: ပြန်ပြောကြည့်လိုက်မယ်။
ပိဋကတ်တော်တွေသင်ယူလေ့လာခြင်း၊ တရားနာယူခြင်း၊ တရားစကားပြောခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း စသည်တို့မည်သည် အချီးအနှီးမဟုတ်ဘူး။ နားလည်သဘောပေါက်မှု ဆိုတာ အဓိကပဲ။ ဗုဒ္ဒအဆုံးအမ တွေကိုလိုက်နာသူ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် ဆိုတာ လူတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဗုဒ္ဒတရားတော်တွေကို လေ့လာတဲ့လူတွေ သဘောပေါက်တဲ့ အဆင့် ဆိုတာ လေ့လာရုံနဲ့ မရနိုင်ဘူး။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့၊ ရင့်ကျက်မှု အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိမှ လက်ခံသဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာ။ ပစုပန်ကံမက ခင်ဗျားတို့ ချပြတာတွေမှာ “သစ္စဥာဏ်(ဘယ်ဟာ ဒုက္ခလို့ အမှန်အတိုင်း မသိသေးပါပဲ)နဲ့ ကိစ္စဥာဏ်( ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလို့ အမှန်အတိုင်းကျင့်)” ဒီစကားလုံးတွေက စကားနဲ့ပြောရင် စကားပဲ အဖြေထွက်တယ်။ ခင်ဗျား လည်းစကားလုံးတွေအဖြစ်ပဲ သိထားတယ်။ ..ဒါဆို အနှစ်သာရ တကယ့် တရားကို အဖြေရှာလို့ရနိုင်ရဲ့လား။ နောက်တစ်ခု လုံးထွေး ချတာ တွေ ပစုတ်ပန်ကံမ၀ါဒ သမားတွေ အတော်လုပ်ကြတယ်။ အောက်မှာ..ခင်ဗျားပြောတဲ့ “စာဖတ်တာ စကားပြောတာတွေကို အချီးအနှီးလို့ ယူဆလျှင်တော့ ပိဋကတ်ဆိုတာ ဘာလို့သင်နေစရာလိုအုံးမှာလဲ။”
စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ သံဃနာယက အဖွဲ့၊ ခင်ဗျားတို့ ပစုတ်ပန်ကိုနှိပ်ကွပ်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း ဆိုတာ ဗုဒ္ဒအဆုံးအမ တရားတွေကို ယုံကြည်သက်ဝင်မှု၊ ဘာသာတရားကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သလား။ နေရာတစ်နေရာ လိုချင်တယ်ဆိုပြီး အတင်းလိုက် ကြော်ငြာပြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။ တကယ့် သက်ဝင်ယုံကြည် သူလား။ ဗုဒ္ဒအဆုံးအမကို သက်ဝင်ယုံကြည် ကျင့်ကြံဖို့က ရင့်ကျက်မှု ဆိုတာလည်းပါတယ် ဆရာသမားရဲ့။ လူတိုင်းမတူညီတဲ့ ကုသိုလ်ကံမှာ ရှိတယ်။ တစ်ယောက်နားလည်တာကို တစ်ယောက် နားမလည်ကြဘူး။ အစစအရာရာ မတူညီကြဘူး။
thantmonzaw says: အမှန်ပါပဲkokyawzaရေ
Was this answer helpful?LikeDislike 42
မောင်မိုးပြာ says: ဘုရားရဲ့တရားဟာ လူတိုင်းကျင့်လို့ မရဘူးလို့ ဆိုလိုချင်ပါသလား။ စကားပြောတယ်ဆိုတာ ဘာ့အ
Was this answer helpful?LikeDislike 321
ရာဇ၀င်လူဆိုး says: ဟုတ်ကဲ့…သူတို့ အစား ကျုပ် နားလည်ပါတယ် ခင်ည….။
kai says: အကုန် လွှတ်လိုက်တော့ ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ၊ ကိုယ့်အိတ်ထဲက စိုက်ပေးရတာမှ မဟုတ်တာ။
ကိုသစ္စာ says: (လက်ကမ်းတယ်ဆိုတာ သဘောထားကြီးတယ် ဆိုတာက အာဏာရှိတဲ့သူနဲ့ နေရာ အပေါ်က ရောက်တဲ့သူပဲ သဘောထားကြီးနိုင်တယ်။ ဘယ် သူတောင်းစားကမှ အပေါ်ကို သဘောထား မကြီးနိုင်ဘူး။) good တယ် ကိုဇာဂနာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 128
zawmyothu says: ဒီပိုစ်တင်တဲ. “မောင်မိုးပြာ” စာတွေတင်ပဲတင်တာ လား
မောင်မိုးပြာ says: ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မသိဖူးသေတဲ့ အသိတွေ၊ မတွေးဖူးသေးတဲ့ အတွေးတွေကို သိနိုင် တွေးနိုင်ကြပြီး လူတွေဆီမှာ မလိုအပ်ပဲ ဝန်ပိုတွေ ပိနေတာကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ကြစေချင်တဲ့ စေတနာအပြည့်နဲ့တင်ပြပေးနေတာပါ။ အချိန်သိပ်ပြီး မပေနိုင်တာကြောင့် ရတဲ့အချိန်မှာပဲ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာမို့ပါ။
thit min says: မပူပါနဲ့ လာပါလိမ့်မယ်။
we ren thu says: ကိုမိုးပြာရေ သစ္စဥာဏ်တွေ ကိစ္စဥာဏ်တွေ ပြောရအောင် တိုတို့ရဲ့ ပါးစပ်က မတန်သေးပါဘူး
countryboy says: ကိုယ့်လူရေ အပြာဝတ်တာ၊ အ၀ါဝတ်တာတို့နှင့် ဘုရားတပည့်အဖြစ် တိုင်းတာမှာလား၊ ခင်ဗျား တို့ ကျုပ်တို့တွေက ဘာဝတ်ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်နေတာလဲ၊ ဘုရားတရားကို ကြားနာခဲ့ရလို့ မဟုတ်ပါလား။ ဂျပန်တို့၊ တရုတ်တို့မှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ဘုရားတပည့်မဟုတ်ဘူးလို့ ဘာနှင့် အထောက်အထားပြမလဲ၊ ဘုရားက အဆင့်အတန်း၊ ဂုဏ်သိမ်တွေကို ပြောနေသူလား၊ တရုတ် ပြည်ကစွယ်တော်ကို မဟာယာနဘုန်းကြီးစောင့်ရှောက်ထားတာ၊ ထေရ၀ါဒကသွား ပြီး ချော့ရတာ ၊ ဒါကအဓိကမကျပါဘူး၊ အသိတူ၊ အမြင်တူ၊ အကျင့်တူ ဖြစ်ဖို့ သင်္ကန်းဝတ်ကြတာ၊ မြန်မာပြည်မှာသာ အ၀တ်တို့ ၊ အသားအရောင်တို့ ၊ အဆင့်အတန်းတို့ ခွဲခြားကြတာပါ၊ ဘောလုံးသမားတွေတောင် လူမျိုးရေးခွဲခြားရင် အပြစ်ပေးအရေးယူခံရတာ သိသင့်ပါတယ်။ အဓိက တရားကိုသိဖို့နှင့် ကျင့်ဖို့ပါပဲ၊ လွတ်ချင်ရင်ကျင့်၊ ဒါပဲလို့ပြောပါရစေ။
we ren thu says: ပြောတတ်တဲ့ဘက်ပဲ လျှောက်ပြောမနေပါနဲ့ လေ—အဲဒီအပြာဝတ်တဲ့ကိစ္စကို စကားလုပ်လာပြောနေတယ် ဗျာ——-ပြောလို့ ကောင်းတဲ့စကားပဲ ပြောမျနနဲံ့ ဦး — ဗို၇ံ တို့ေ၇းထားတာအများကြီး -တခြားစကားတွေကျန်သေးတယ် -ဖြေ၇ှင်းချင်၇င် အကုန်ဖြေ၇ှင်း—–အင်္ကျီဝတ်တဲံ့ကိစ္စကိုေ၇းကြီး ခွင်ကျယ် လုပ်နေစ၇ာမှမလိုတာဗျာ…………—(အဲ့ဒီဘဲ ၀တ်ဝတ်မ၀တ်ဝတ်–တုံးလုံးပဲနေနေဗျာ
we ren thu says: ကိုယ့်လူရေ အပြာဝတ်တာ၊ အ၀ါဝတ်တာတို့နှင့် ဘုရားတပည့်အဖြစ် တိုင်းတာမှာလား၊ ခင်ဗျား တို့ ကျုပ်တို့တွေက ဘာဝတ်ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်ဖြစ်နေတာလဲ၊ ဘုရားတရားကို ကြားနာခဲ့ရလို့ မဟုတ်ပါလား။ ဂျပန်တို့၊ တရုတ်တို့မှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ဘုရားတပည့်မဟုတ်ဘူးလို့ ဘာနှင့် အထောက်အထားပြမလဲ၊ ဘုရားက အဆင့်အတန်း၊ ဂုဏ်သိမ်တွေကို ပြောနေသူလား၊ တရုတ် ပြည်ကစွယ်တော်ကို မဟာယာနဘုန်းကြီးစောင့်ရှောက်ထားတာ၊ ထေရ၀ါဒကသွား ပြီး ချော့ရတာ -ဆိုတဲ့ ဟာလေးတွေဟာလေ ဟာလေ ———-